ခွေးတူ ဆိတ်တူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ခွေးတူ ဆိတ်တူ
Posted by DEPARKO DEPARKO on Sep 1, 2012 in Contributors, Copy/Paste |7comments
ဆိတ်တွေဟာအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရင် ခေါင်းချင်းဆိုင်ထားပြီး နောက်မဆုတ်တမ်း ခွေ့တတ်သလို ခွေးတွေဟာလည်း ကိုက်တတ်ဟောင်တတ်ပါတယ်၊
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူလတ်တန်းစားများကားစီးနိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီး မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုမြင့်တက်လာပြီး လမ်းမတွေပေါ်မှာကားတွေဟာ လမ်းတွေနဲ့မဆန့်အောင် ပေါက်ကွဲထွက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ကားပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့ လောင်စာဆီကိုချွေတာ၊ မိမိကုန်ကျစားရိတ်ကိုချွေတာ(ချမ်းသာပေမဲ့) အလုပ်သွား၊ ခရီးထွက်၊ကျောင်းကြိုပို့၊အလည်အပါတ်သွားတာတောင် လိုင်းကား၊ခရီးသည်တင်ကား စီးကြတယ်လို့သိရပါတယ်၊ ဒီမှာကတော့ ဂုဏ်တု ဂုဏ်ပြိုင် ၀မရှိဘဲဝိလုပ်( ဒီနိုင်ငံမှာကကြွားဝါချင်တဲ့သူများတယ်) ကားမျိုးစုံနဲ့ ဖအေက အလုပ်သွားကားတစ်စီး မအေက ဈေးဝယ်ထွက်ကားတစ်စီး သားတွေ သမီးတွေက ကျောင်းသွားကားတစ်စီးစီနဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကားတွေဟာပြည့်ကြပ်နေပါတယ်။
သာမန်ချမ်းသာတဲ့သူတောင်ကားနှစ်စီးလောက်ပိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့အခြေခံလူတန်းစားစီးတဲ့လိုင်းကားတွေဟာ လိုရာခရီးရောက်ဘို့ ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့် (၀န်ထမ်း၊အလုပ်သမား) အချိန်တွေအကြာကြီး ကားပေါ်တွေမှာ အချိန်ဖြုန်းရပါတယ်၊ ဒီကြားထဲ လမ်းစည်းကမ်းကိုမလိုက်နာ လိုရာခရီးကို ဖြတ်လမ်းက သွားချင်တဲ့ လူ့အန္ဒတွေဟာ အတင်းတစ်ဖက်ယာဉ်ကြောက လုဝင် နောက်လဲမဆုတ်ပေး ကားခြင်းခေါင်းခြင်းဆိုင်ပြီး ခွေးတွေ၊ဆိတ်တွေလိုစောင်နေကြတာ ရန်ကုန်မြို့ ကားလမ်းဆုံတွေမှာ နေ့စဉ်တွေ့ရပါတယ် သူတို့ကြောင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ရတာကို ဖြေရှင်းဘို့ဘယ်လို လုပ်ကြရပါ့မလဲ။
လမ်းထွက်ရင် တုတ်တစ်ချောင်းကိုင် ထွက်မှ ဖြစ်တော့မယ့် ခေတ်
အင်းးးး ခက်ပါ့ ကားစုတ်တွေစီးနေရတုံးကလဲ တစ်ဒုက္ခ၊ ကားကောင်းကောင်းတွေ အတန်အသင့်ဈေးနဲ့
အတန်အသင့်ပေါလာတော့လဲ ( ကားကျပ်တဲ့ ) တစ်ဒုက္ခ ။
လှည်းတန်းရယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ ရယ် အဆိုး ဆုံးပဲ ! ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ ဆိုရင် တခါတရံ နာရီ နဲ့ ချီပြီး ကြာအောင် ကားတွေပိတ်နေတယ် ။ ဒါကို ဘယ်လို ပြေလည်အောင် ရှင်းပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်နေပါတယ် ။ ကိုဒီပါ ရေ ! ခေါင်းစဉ် ပေးပုံ သဘောကျ တယ်ဗျို့ ! ခွေးတူ ဆိတ်တူ ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စား သွားတယ် ! ကျွန်တော် မြင်ဘူး တာက ညဘက်ကြီး မှာ ခွေးတူ ဝက်တူ ကို ရှမ်းပြည် ဘက်မှာ မြင်ဘူးတာ ။ ခုဟာ က ဝက် မဟုတ်ပဲ ဆိတ်ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံ တင်တယ် ထင်လိုက်တာ ။ ဪ — ပြီးမှ ရန်ကုန် မြို့ က ကားမောင်းသူတွေကိုး လို့ သိလိုက်တာ ။ ( မှတ်ချက် ။ ။ ရွာ သူ/သား များနဲ့ စာဖတ်သူများ မပါ )
Nay Mara says:
DEPARKO DEPARKO မြင်းတစ်ကောင်လောက် ၀ယ်ပြီးသွားရင်ကောဗျာ။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ကယ်က မစီးရတော့ မြင်းဆိုရင် ရပ်ထားတဲ့ကားကြားထဲကနေ အရှေ့ကိုတိုးသွားလို့ ရတာပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့မန်းမှာတော့ ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ဟိုဘက်တိုးလိုက် ဒီဘက်တိုးလိုက် တိုးရင်းနဲ့မောင်းလိုက် ဟဲဟဲ အဆင်ကိုပြေလို့။
ယာဉ်ကြောပိတ်လို့ အလုပ်လည်း နောက်ကျရပေါင်းများပြီ ..
ကျုပ် အခု မိုးပျံယာဉ်တစ်စီး ထွင်နေဘာဒယ် ..
ပြီးရင် အေးဆေး မိုးပေါ်ကနေ သွားမယ် ..
ရုပ်ဝတ္တုတွေ ကြီးစိုးလာတာ စိတ်ပျက်စရာပါဗျာ။